शिक्षित वर्ग नै खान मान्दैनन् हात्तीपाइलेको औषधि – Health Post Nepal
शिक्षित वर्ग नै खान मान्दैनन् हात्तीपाइलेको औषधि
२०७७ चैत २० गते ११:३१
सरकारले हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि आजबाट एक सातासम्म औषधि सेवन कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
शुक्रबारबाट देशका १२ जिल्लामा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि सेवन कार्यक्रम सुरु भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ।
सरकारले गत फागुन २९ गतेबाट हात्तीपाइलेको औषधि खुवाउने योजना बनाएको थियो।
तर, कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान प्रभावित हुने भएपछि समय सारिएको थियो। अभियान सञ्चालन हुने जिल्लामा झापा, धनकुटा, मोरङ, बारा, लमजुङ, पर्वत, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलाली छन्।
महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार औषधि सेवन कार्यक्रम १२ जिल्लाका १२९ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदै छ।
७० लाख ४५ हजार व्यक्तिलाई औषधि खुवाउने महाशााखाको योजना छ। औषधि खुवाउनका लागि ५ हजार ४ सय स्वास्थ्यकर्मी र ९ हजार ५ सय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिँदैछ।
नेपालमा करिब ३० हजार हात्तीपाइले रोगी रहेका छन्। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले सन् २००३ देखि औषधि खुवाइरहेको छ। सन् २०२० सम्म नेपालबाट पूर्णरूपमा यो रोग निवारण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो। तर, २०२० का लागि राखिएको निवारण लक्ष्यमा सरकार विफल भएको छ।
महाशाखाले दक्षजनशक्तिकोे अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क गर्दै आएको छ। ‘हामीकहाँ दक्षजनशक्तिको अभाव छ। भएका जनशक्ति पनि समायोजनले यता–उता भएका छन्,’ डा. पौडेलले भने।
उनका अनुसार मानिसले असर गर्ने भन्दै औषधि सेवन नगर्नुले निवारणमा चुनौती थपिएको छ। ‘अधिकांस मानिस औषधि खान डर मान्छन्। त्यसमाथि शहरी क्षेत्रका मानिस औषधि सेवन गर्दै गर्दैनन्,’ डा. पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी घरमा पुगेर औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालन गरेका छौं।’
अभियानमा ‘डाइथाइल कार्बामाजिन’ (डिइसी) र जुकाको औषधि ‘अल्वेन्डाजोल’ खुवाइने छ। रगत र पेटमा भएको परजीवी जुकालाई ती औषधिले मार्न सहयोग गर्छन्। डा पौडेलका अनुसार ‘डिइसी’ ले रगतमा रहेको परजीवी जुकालाई र ‘अल्वेन्डाजोल’ ले पेटमा रहेका जुकालाई मार्ने गर्दछ।
हात्तीपाइले रोग संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ।
यो रोग लागेपछि मानिस शारीरिक रुपमा अशक्त, असमर्थ र अपांग हुने गर्दछ। यो रोग एक प्रकारको मसिनो धागो आकारको जुकाजस्तै परजीवी मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेपछि हुने गर्दछ। परजीवी प्रवेश गरेको केही वर्षपछि मात्र यो रोगको लक्षण देखिने गर्दछ।
जाडोमा ज्वरो आउनु, शरीरमा कम्पन्न हुनु, लिम्फ नली सुन्निनु, रातो भई दुख्नु, हातगोडामा नीला–काला धर्सा देखिनु, गिर्खा बढ्नु, पुरुष अण्डकोष ठूलो हुनु, दुख्नु, गिर्खा भेटिनु र पछि हाइड्रोसिल अर्थात अण्डकोष वरिपरी पानी भरिएर ठूलो हुनेजस्ता लक्षण देखिएमा हात्तीपाइले (फाइलेरिया) भएको हुनसक्छ।
साथै, महिलामा यौनाङ्ग अथवा स्तन सुन्निनु र दुख्ने भएमा पनि हात्तीपाइले भएको हुनसक्छ।